Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Ubomi obutsha beBluefields eWestmoreland Jamaica
Indawo yeendwendwe • Iindaba zaseJamaica zokuPhula
ekuqaleni kukaNovemba ka-2021, inyathelo leBluefields Best Kept Street Competition, eyingqondo kaKeith R. Wedderburn yaseBluefields Organic Farm, iyakubhiyozela kwaye iqaphele umsebenzi onzima kunye nobuchule obubekwe ngabahlali abaninzi ekwenzeni iindawo zabo zokuhlala zibe yindawo entle phila.
Amabhaso alungiselelwe ukukhuthaza ukuzingca ngoluntu kwiindawo abahlala kuzo, ukukhuthaza iindlela zokusingqongileyo, ukwandisa ulwazi ngokusingqongileyo, kunye nokuvuza abantu abajonga izitalato zabo.
Abahlali baya kungena ngokudibeneyo okanye umntu ngamnye esitratweni, emva koko abagwebi baya kunikwa uxanduva lokufumana isitrato esisifaneleyo:
1. Eyona Mbasa inomtsalane ngeGadi yangaphambili 2. Eyona Mbasa yeGadi yaPhambili inomtsalane 3. IMbasa eGqwesileyo yokuziSebenza yokuRisayikilishwa 4. IMbasa yeNdawo eGqwesileyo eGqwesileyo yokuLwa nokuLitha kunye 5. Abantu abatsha kwiMbasa yeNdawo eGqwesileyo eGqwethiweyo.
Idolophu yaseBluefields yasekwa ngo-1519. I-Annotto Bay kunye ne-Sevilla La Nueva okanye i-New Seville ziidolophu ezimbini ezandulela i-Bluefields. UHenry Morgan waseBuccaneer, uKapteni Blight (wazise i-breadfruit kunye ne-ackee kwisiqithi), kunye no-Henry Gosse, umbhali odumileyo kwiintaka zase-West Indian, bonke bahlala eBluefields. Kwakukho namasimi amaninzi apho iintsalela zeBluefields kunye neShafton zisekhona nanamhlanje. Ukuza kuthi ga ngoku amalungu avela eluntwini achulumancile kakhulu ngale projekthi icetywayo. IKomiti eLawulayo iye yasekwa ukulawula iprojekthi ekhokelwa nguKeith Wedderburn kwaye sele ifumene inkxaso yenkxaso kunye nezibophelelo kumalungu osapho lukaBluefields ahlala phesheya kolwandle.
Nje ukuba ukhuphiswano luqale, balindele inguqu epheleleyo. Ukongeza ekucoceni, ukuhombisa kunye nokugcinwa kweendawo, iziphumo ezilindelekileyo zininzi. Umzekelo, iNkunkuma iya kulawulwa ngendlela enoxanduva ukuya phambili, akufuneki kuphinde kubekho ukutshiswa kwenkunkuma okanye ukulahlwa ngokungekho mthethweni. Abathathi-nxaxheba baya kukhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba kwiindibano zocweyo ezinxulumene nolawulo lwenkunkuma eqinileyo kunye nokudibanisa umgquba okuya kubangela ukuba bafunde indlela yokwahlula inkunkuma yabo kwaye baqalise ukusebenzisa izinto eziphilayo ukuze benze umgquba. Kwakhona, inkunkuma eqokelelweyo ayisayi kusala ngasemva. Ulawulo olungcono lwenkunkuma, abasemagunyeni abafanelekileyo baya kufuneka ukuba baqokelele izinto ezilahlwayo ezifana neplastiki, iibhotile zeglasi, iifayili ze-aluminiyam njl.njl ngamaxesha athile kwisitalato ngasinye. 2 Ezinye iimpendulo ukuza kuthi ga ngoku zezi: “Umbono olungileyo esiwuvumayo njengenye yeeDolophu zelizwe njengeeprojekthi zoShishino kwaye siya kukunika inkxaso kunye nolwazi kwakhona” – uDiana McIntyre Pike, uMcebisi woPhuhliso loKhenketho loLuntu “Ndiyayamkela le mbono kuba iyakwenza abantu ekuhlaleni banemvakalelo ye-PRIDE yendawo abahlala kuyo, kunye nenkuthazo yokuhamba nayo. Ndizinikele kuwe, ndiza kukuxhasa. " – URalva Ellison, ilungu loluntu lwaseBelmont, ngoku elihlala phesheya. "Kuvakala kukuhle kwaye linyathelo elihle kakhulu." Utsho uSajini Berry wesikhululo samaPolisa saseBluefields.
“Iingcamango Ezilumkileyo. Ndikhwele ukuba negalelo nanini na kufuneka”, utsho uRobblin Wedderburn, owayesakuba ngumhlali waseBelmont kunye noSekela-Ntsumpa wamaPolisa odla umhlala-phantsi ohlala e-US “Inyathelo eligqwesileyo. Yakhe malunga nolutsha ukuze uzinze ixesha elide. " Uthi uWolde Kristos, uMphuhlisi woLuntu kunye nomhlali waseBelmont "Umbono omhle. Ndikholelwa ukuba into efana nale iya kuba lulutho kuluntu.” – Nickeisha Robinson, umhlali Belmont “Egqwesileyo… Ukuba kunokwenzeka, ngobubele uthumele isindululo kwidilesi yam ye-imeyile. Ngokuqinisekileyo ndiza kufumana ukuthenga kwi-Westmoreland Municipal Corporation” -
UMichael Jackson “Ndingavuya ukusebenzisana nawe. Sinikezela ngobusuku basimahla ngebhaso.” – Linda Cheddister (Luna Seas Hotel) “Kuvakala ngathi yiprojekthi elungileyo. Ndiya kukuvuyela ukuba ngumgwebi kule projekthi. Nceda undinike ulwazi oluthe kratya” – Barrington Taylor (IiProjekthi zeWatershed NEPA) “Enkosi ngokufikelela. Zive ukhululekile ukundithumelela le ngcaciso ingentla kunye nazo naziphi na iinkcukacha ezingaphezulu” – Rochelle Forbes (uManejala we-PR weSandal South Coast). NgokukaSihlalo weKomiti eLawula uKhuphiswano loLuntu lwaseBluefields, “Oku bekungeke kwenzeke ngaphandle kweqela lethu elizinikeleyo lamavolontiya asebenza emva kwemiboniso. Aba baquka uMnu André James, uNksk. Alrica Whyte-Smith, uNksz Tracey Edwards, uNksk. Diana McIntyre-Pike, uNksz Tracey Spence, uMnu Charles O. Wilkinson owaziwa ngokuba nguSir W One, uNksz Alison Massa, uNksz Adrianna Parchment kunye noMnu Kelon Wedderburn. Sibulela abaxhasi bethu, abahlobo kunye neentsapho zoluntu. Sikwathanda ukusebenzisa eli thuba ukukhuthaza nabanye abasuka kulo mmandla, abasenokuba bengekho, ukuba bakhwele.
Ixesha lokubambana ngezandla kwaye uncede uphucule isitalato sakho ngoku! Le iya kuba yindawo yakho entle yaseJamaican ojonge phambili kuyo, ekubuyeni kwakho. Yonke iminikelo iya kusetyenziselwa amabhaso nokuncedisa abathathi-nxaxheba ekulungiseleleni, apho kunokwenzeka oko. Le projekthi iya kukhuthaza abathathi-nxaxheba ukuba baye kwezinye izenzo ezilungileyo, kwaye inokwamkelwa ngokulula kwezinye iindawo zaseJamaica kwaye ibe yintshatsheli yotshintsho kuluntu.